खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार विदेश पठाउने गरेको भेटियो
काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले खारेजीमा परेर पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै विदेश जाने युवासँग राहादानी र पैसा लिएका वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावर)लाई कारबाही गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका तर वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधित व्यवस्थाबमोजिम धरौटी रकम थप गर्न नसकी खारेजीमा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शमा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन्। ओलीले सोमबार बिहान दाहालसँग यो विषयमा छलफल पनि गरे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच झन्डै दुई घण्टा वार्ता
सफलताका भोको त धेरै छन्, तर सफलता हासिल गर्ने कम । संभवत् मिडिया क्षेत्र कोहि रियल अन्टर्प्रेनर छन् भने ती टेड टर्नर हुनु पर्छ । बस् चाह हुनुपर्छ व्यापारको, कारोवार हुन्छ अपारको । यस्तै रहेछ कहानी रोवर्ट इडवर्ड टर्नर अर्थात् टेड टर्नरको । उनी विश्व चर्चित टेलीभिजन सिएनएनका मालिक हुन् । १९३८ नोभम्बर
काठमाडौं । पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्ता पक्षका सांसदले पत्रकारिता गर्न प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपाका १४ जना सांसदले
व्यवसाय र समाजसेवा एकै ठाउँमा अटाउने बिजनेस कन्सेप्ट : वान-टु-वान
काठमाडौं । सामान्यतया व्यवसाय र समाजसेवा एकै ठाउँमा अटाउने शब्दहरु होइनन् । तर यस्ता व्यवसाय पनि हुन्छन् जसको व्यवसाय समाज सेवाको आडमा अडेको छ । सन् २००६ तिर ब्लेक माईकोस्की नाम गरेका एकजना अमेरिकी नागरिक अर्जेन्टिना घुम्न पुगे । घुमाईकै क्रममा उनले एक जना अमेरिकी स्वयंसेवीलाई भेटे । जो अर्जेन्टिनाका
काठमाडौं । संघीय संसदका सांसदले दसैं भत्ता माग गरेका छन्। श्रमिकदेखि कर्मचारीसम्मलेदसैंमा एक महिना बापतको भत्ता पाउने भन्दै सांसदले पनि सरकारसँग भत्ता मागेका हुन्। अन्य क्षेत्रमा वर्षको १३ महिना भत्ता पाउने तर सांसद र उनीहरूको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले नपाउने गरेको कारण समस्या भएको सांसदको
काठमाडौँ, । यस वर्षको मनसुन बिहीबारदेखि नेपाल भित्रिएको छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै मनसुन भित्रिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यले जानकारी दिनुभयो । विभागअन्तर्गत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्षको मनसुन सुरु भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ । मनसुन भित्रिएको
मेलम्चीको ठेक्का आह्वान, ११ महिनापछि पानी आउने
काठमाडौँ – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङसहित बाँकी निर्माणको काम गर्न ठेक्का आहवान गरेको छ। करिब ६ महिनादेखि ठप्प रहेको आयोजनाको काम अघि बढाउन ठेक्का आहवान गरिएको हो। मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार १० वटा प्याकेजमा टेन्डर आहवान गरिएको छ। व्ययभार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू लामो समयदेखि अल्झाइरहने ठेकेदारलाई ‘अयोग्य’ घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै उहाँले निश्चित समय दिएर आयोजना पूरा गर्न लगाउनुपर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित ठेकेदारलाई अयोग्य
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीले ‘बदनियतपूर्वक’ कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गरेर आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको भेटिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्ममा उनीहरूले अस्वाभाविक चलखेल गरेका हुन् । सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि
यसरी फुट्यो मेलम्ची खानेपानीका ३० किलोमिटर पाइप, १६ करोड क्षति
जेठ,संरचना निर्माण प्रक्रियामा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा काठमाडौंमा बिछ्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ३० किलोमिटर पाइप फुटेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना–२ ले पाइप बिछ्याएपछि भएको सडक विस्तार र ढल खन्ने क्रममा बानेश्वर, कालोपुल, बिजेश्वरी, बल्खुलगायत क्षेत्रमा पाइप फुटेका हुन् । ३०
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, विधिसम्मत गरिएको विज्ञापन रोकिँदैन : लोकसेवा
काठमाडौं। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनको प्रक्रिया जारी नै राख्ने भएको छ । आयोगले वैधानिक रूपले प्रकाशन गरेको विज्ञापन आफैंले रद्द गर्न नसक्ने जनाएको हो । आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा ९ हजार १ सय ६१ संख्याका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।
प्युठान– कुनै समय बामदेव गौतम गृहजिल्ला प्यूठान आउँदा बेग्लै चहलपहल हुन्थ्यो । चुनाव हारजित जे हुँदा पनि उनी राजनीतिमा चर्चामा आइरहे। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा गौतमले प्युठान र बर्दियाबाट चुनाव जिते। उनले बर्दिया छाडेर प्युठान रोजे। चुनावताका गौतमले जिल्लाबासीसँग भनेका थिए, ‘अब म मेरै जन्मभूमिमा
यसरी पड्कियो बम, टाइमिङ मिलाउन नजान्दा विस्फोट
काठमाडौं–सोमबार बन्द सफल पार्न झिससिमेमै बिस्फोट गर्ने योजना बनाएका विप्लव समूहका कार्यकर्ताले टाइमर मिलाउन नजान्दा अघिल्लो बेलुकी नै विस्फोट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । सोमबार बिहान ४ः१५ मा विस्फोट गराउने गरी टाइम सेट गर्दा आइतबार अपरान्ह ४ः१५ मा विस्फोट भएको प्रहरीको भनाई
त्रिविको जागिरमा नेता र त्रिवि कर्मचारीका आफन्त भर्ती
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको खुला प्रतिस्पर्धामा त्रिविकै उच्च पदाधिकारी, विद्यार्थी संघ (संगठन र नेताका नातेदारहरुको) नाम निस्किएको छ । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमा धेरैजसोे पहुँचवालाका आफन्त परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यसबारे
बोकाको मूल्य ५७ हजार !
भक्तपुर : भक्तपुर नगरपालिका ५ टौमढीमा ५७ हजारमा एउटा बोका बिक्री भएको छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर बुधबार ५७ हजार रुपैयाँ तिरेर बोका खरिद गरिएको हो। बिहीबार भक्तपुरका प्रजापति र केही समुदायबाहेकका नेपालभाषीले दुगु पूजा मनाउँदैछन्। सोही पूजाको लागि बुधबार उक्त बोका किनिएको हो। बोका हेर्दै लोभलाग्दो
काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले पाउन थालेको नागरिकता वितरण रोकिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन लाम बसेका युवायुवती बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निराश भएर फर्किएका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार
काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारसहित देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव
नेकपा एकता, जुटयो सहमति आज घोषणा हुँदै
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता टुंगो लागेको छ । शीर्ष नेताबीच सहमति जुटेपछि आज (सोमबार) जिल्ला कमिटीको घोषणा हुँदै छ । ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएको थियो । पार्टी एकता भएको ११ महिनापछि जिल्ला कमिटीले पुर्णता पाउँदै छ । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी
काठमाडौं - नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा पटकपटक अनुतीर्ण व्यक्ति चिकित्सकको रुपमा आइतबार राष्ट्रपतिद्वारा बिभूषित भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (निलकण्ठ नगरपालकिा–३ शान्त बजार धादिङ) मा कार्यरत राम थापा क्षेत्री प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी)
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर राणाले पदभार गरेकै दिन भ्रष्टाचार मुद्दामा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको तीन महिना भयो । तर, उनको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार मुद्दा परेको पाइँदैन । १९ पुसमा पद बहाल भएयता उनले भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी तोक्ने गरे पनि
काठमाडौं । मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्ने भन्दै पृथक्तावादी अभियान चलाएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा सिके राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गठबन्धनका तर्फबाट
काठमाडौं–नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राती ११ बजेसम्म बसेको उपसमिति बैठकले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ । यस्तै पर्यटन
मामा हामीलाई तात्तातो चाउचाउको सुप ! त्यो भन्दा पहिला ४ वटा चिया ल्याइदिनुहोस् न ।‘हुन्छ हजुर बस्दै गर्नुहोस् ।’ ग्राहकलाई हेर्दै नहेरी मामाले जबाफ फर्काउँछन् । या भनम उहाँलाई हेर्ने फुर्सद सम्म छैन ! पुसको महिनास चिसोले आफ्नो अस्तित्वको पुरुषार्थ पस्की रहेको छ । मामाको चिया पसलका कुनै टेबल खाली छैनन्
युवाहरुले गालाभरी दाह्री पाल्ने रहरको युगमा छौं, हामी । आज सायद दाह्रीका लागि इतिहासकै उर्बर समय बनेको छ । विश्वको फेसन बनेको छ, दाह्री, हिजो चिल्लो गालामा सुन्दर देखाउने क्रिम दलेर हिड्न रुचाउनेहरु कुनै सप्रिएको घारी झैं गालाभरी दाह्री पालेर हिड्न थालेका छन् । घरमा आमाले ‘ओए मोरा के गति बनाएर हिँडेको
नेकपाभित्र चर्काचर्की, अमेरिकामै ओलीको आक्रोश
काठमाडौँ – नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर बिहीबार संसद् र शुक्रबार स्थायी समिति सदस्यको भेलामार्फत अभिव्यक्त गरेको असन्तुष्टिले सत्तारूढ दलभित्र हलचल पैदा भएको छ । हलचलले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा न्युयोर्कमा
लक्ष्मी भण्डारी/ सुर्खेत हामी डाक्टरहरु पैसामुखी भए र जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दैनन् भन्ने सुन्छौं । कतिपय त छन पनि यस्तै । तर, सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु त्यस्ता हुँदैनन्, उनीहरुले समाजमा उदाहरणीय काम गरेका हुन्छन् । यस्तै स्वास्थ्यकर्मी हुन्, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतकी सीता शर्मा । जब उनी पाठेघरसम्बन्धि
दशैंको टीकाको साइत कात्तिक २ गते, बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटमा
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दशैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । यसवर्ष असोज २४ गते नवरात्र आरम्भ हुने र त्यस दिन बिहान ७ बजेर १५ मिनेटमा घटस्थापनासहित जमरा राख्ने साइत छ । असोज २५ गते बिहीबार बिहान १० बजेर २४ मिनेटमा झण्डा फेर्न शुभ हुने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले
यातायात व्यवसायीले टिकट बुकिङ्ग खुला नगरेपछि भाडा वृद्धि
काठमाडौं– सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दशैंमा काठमाडौंबाट घर जाने यात्रीका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुला नगरेपछि भाडा वृद्धि गरिएको हो । पटक—पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायीले दशैको अग्रिम टिकट खुला गर्न आनाकानी
मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट
काठमाडौं– देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठक आह्वान भएको थियो । संविधानको धारा २३४ ले नै व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आइतबारका लागि आह्वान गरेका थिए । केन्द्रसँगका असन्तुष्टिबारे समान धारणा बनाउन मुख्यमन्त्रीहरू
कुल पोष्ट : 114